by admin 20-07-01
Dhawaan qalliinkayaga qalliinka waa iib kulul. Qalliinkayaga Qalliinka waxaa loo iibiyaa dalal badan oo adduunka ah. Macaamiisha aad ayey ugu qanacsanyihiin tayada wax soo saarka iyo adeegeena kooxdayada wax iibisa. Sterilisation: Codsiyada nadiifsan: Waxaa loo isticmaali karaa qalliinka iyo daaweynta bukaanka.Inspec ...
Dhawaan gogoshayada gooni u goosadka ayaa ah iibka kulul. Dharka go'doominteenna waxaa laga iibiyaa dalal badan oo adduunka ah. Macaamiisha aad ayey ugu qanacsanyihiin tayada wax soo saarka iyo adeegeena kooxdayada wax iibisa. Wax soo saarkii: Nooc la goyn karo oo Suuqa Muuqaal A ah
waxaa maamula 20-06-16
Dhowaan dharkayaga iska ilaaliya dharkeena ayaa ah iib kulul. Qalabkayaga difaaca ayaa laga iibiyaa dalal badan sida UK, Japan, Canada, Malaysia iwm ...
Dhowaan fowdadayada la adeegsan karo waa iib kulul. Waxaan siinay macaamiisha adduunka oo dhan. Macaamiisha aad ayey ugu qanacsanyihiin tayada wax soo saarka iyo adeegeena kooxdayada wax iibisa. Astaamahayaga la tuuri karo ayaa leh astaamaha hoos ku xusan: 1) biyo-ka-hortagga, saliida-diidka, boodhka ka-hortagga, isticmaalka ballaaran ee qaybaha kala duwan….
waxaa maamula 20-05-27
Cassetkayada IgM / IgG ee maqalkaagu waa iib kulul. Waxaan siinay macaamiisha adduunka oo dhan. Macaamiisha aad ayey ugu qanacsanyihiin tayada wax soo saarka iyo adeegeena kooxdayada wax iibisa. Warshaddeenu waxay leedahay awood farsamo oo xoog leh. Cudurka Coronavirus 2019 (COVID-19) IgM / IgG Antibody Test waa mid dhakhso ah, tayo leh ...
waxaa maamulay 19-06-03
Dhawaan warshadeena ayaa 800,000pcs weji gabax ah ka iibisay Macaamiisheenna Japan. Macaamiilku aad ayuu ugu qanacsan yahay tayada wax soo saarka iyo adeeggayaga. Gaashadeenna wejiga ayaa ka hooseeya jilayaasha: 1. Badeecadani waxay u adeegsaneysaa PET hufan sare oo ku saabsan go'doominta wajiga oo dhan iyo ilaalinta. 2. Badeecadu waa iftiin ...
Telefoon ： 13969819257
E-mayl ： Cynthia@napgroup.net
Cinwaanka ： Qolka 1009, Dhismaha ganacsiga Shiinaha, No.100 Hongkong wadada dhexe, Qingdao, Shiinaha
Maxaad dooneysaa inaad ogaato?
Biyaha-Proof Hdpe Apron, Go'yaal ilaalin ah, Dharka Ilaalinta, Dharka Caafimaadka ee la tuuri karo, Dust-Proof Pet Face Shield, Biyo-caddeynta Biyaha,